Axmed Madoobe “Waxaanu Wafdiga Maraykanka kala hadalnay Arinta Gedo, Khilaafka DFS iyo Dagaalka Shabaab” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Axmed Madoobe “Waxaanu Wafdiga Maraykanka kala hadalnay Arinta Gedo, Khilaafka DFS iyo Dagaalka Shabaab”
Feb 12, 2020 - 33 Aragtiyood
Kismaayo ( Kalshaale ) Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam [Madoobe] ayaa maanta Magaalada Kismaayo ku qaabilay Safiirka Dowlada Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto iyo Taliyaha howlgalka Africom Gen. Stephen J. Townsend.
Waxaa lagu sheegay War kasoo baxay Madaxtooyadda Jubbaland Inay Ka wada hadleen Xaalada ka taagan Gobolka Gedo iyo duulaanka gardarada ah ee Dowlada Federaalka ah ay ku qaaday deegaano nabdoon kuwaas oo tan iyo xiliga Dowladu ay halkaas Weerarka ku qaaday ay ka jirtay Xaalada adag waxaana la isku raacay in Dowladu ay halkaas kala baxdo Ciidamada ay gaysay kuwaas oo kala dhantaalay nidaamkii Maamul ee halkaas ka jiray sidoo kalana khalkhal amni daro ka abuuray Gobolka Gedo.
Waxaa kale oo kulankan diirada lagu saaray sidii xal looga gaadhi lahaa khilaafka u dhexeeya Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo Dowlada Federaalka ah waxaana la isku raacay in ay muhiim tahay in xal laga gaadho Khilaafkaas mudada ragaadiyay wada shaqaynta Dowlada Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada dalka.
Dhinaca kale kulan gaar ah oo dhex maray Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo Taliyaha howlgalka Africom Gen. Stephen J. Townsend waxaa lagaga hadlay sidoo loo bilaabi lahaa howlgal midaysan oo Al-Shabaab lagaga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Jubbaland howlgalkaas oo Si wadajir ah ay u fulinayaan Ciidamada Dowlad Goboleedka Jubbaland, Ciidamada Xooga dalka iyo AMISOM oo ay tageerayaan Ciidamada howlgalka Africom ee Maraykanka.
Somalida waxaa ka buuxa dad caqli xun. Ninkaan gaaban ee safiirka Mareeykanka ah oo kasoo shaqeeyay career kiisa oo dhan geeska Afrika, waa ogyahay in daanyeer mdaxweeyne Farmaajo yahay Mareexaan, sidoo kale waa ogyahay in daanyeer ra’iisalwasaare Kheeyre yahay Murusade, waxuu kaloo ogyahay in labadaan nin qabiiladooda eey yahiin argagixisda alshabaabka ee la sheegayo. Waxuu kaloo ogyahay in Somalida eey ka been sheegto diinta Islaamka oo eey sheegtaan, ee diintooda rasmiga ah eey tahay qabiilkooda. Sidaas owgeed eeysan labadaan nin ogoleeyn in lala dagaalamo, amaba la baabi’iyo qabiiladooda argagixisda alshbaaabka ah. Taas badalkeed, in fact, waaba isla shaqeeyaan dowladda dhexe sidii eey xukunka u qabteen Farmaajo iyo Kheeyre iyo argagixisda alshbaaab, amaba kutalagal ha’ahaato, amaba daanyeernimo caqli xummo ha’ahaatee, walaahi shaki la’aan waa isla shaqeeyaan. Oo waa iskabaan, oo is taakuleeyaan ciidankii dowladda dhexe ee awalba qaab darnaa, iyo argagixisda alshbaab. Waxeey noqdeen isku cadow. Meeshii resource ka, iyo hantida iyo xooga dowladnimo lagula dagaalami lahaa aragagixisda alshbaab, waxaaba loo isticmaalayaa isla maamuladda eey argagixisadda alshbaab ku heeyso weerarada, iyo ganacsatada kasoo horjeeda argagixisda alshbaab.
Xataa, dowladda dhexe oo uu hogaamiya Farmaajo iyo qabiilkisia Mareexaan, waxeey sheegeen xataa si “proxy” ah, oo gacan dheereeyn ah, in eey argagixisada alshbaab uGu isticmaalaan dagaalka siyaasad, iyo qashqashaada eey ku hayaan Kenya, maadaama eey iyada Kenyanaba ku qasmatay arrimahii qabiilada Somalida.
Intaas in uu u sheego Ahmed Madoobe ayeey aheeyd safiirkaan Mareeykanka iyo hogaamiyayaasha ciidanka Mareeykanka. Sidoo kale, waa in intaan loo sheegaa Somalida oo dhan.
Halagu goobto Farmaamo daanyeer doorashada soo socota, si Meesha looga raacdeeyo. Qabiilada Somaliyeed oo eey dagaalka ku hayaan Farmaajo iyo alshbaab waa in eey is kaasahadaan oo eey raacdeeyaan Daanyeerkaan doorashada soo socota.
MUXUU waqti iska lumiyay ILAAHOW WEYNOW caqligiisa hanna siin. ≈©≈WAR intee laga soo gemay ninkaan?. WBT
Farmaajo waa shaqsi wuuna tegayaa,idinkoon Ku gooban,laakiin ma ii sheegi kartaa kuwii ka horeeyay wax horumar ah oo muuqda oo ay qabteen?.
Anigu taageere uma ihi farmaajo,laakiin waxan qirayaaa inay wax badan qabteen isaga iyo kheyre.
Balse waxa lugaha Ku dhegan dawlada waa
Hiraab iyo labadan maamul ee darood oo xaaraan Ku naax ah.
Marqaatiga ilaahey dartiis baa loo furaa,
Shaqsi masuul ahina khaladaad wuu geli karaa, malaaig maaha,waa bashar.
Waana LA dhaliili karaa,laakiin tola’ay,iyo habarwacasho,guul laguma gaaro.
Dawladan halsano baa u hadhay,iska sugaintey dhamaaneyso.
Hadaad sidan u dhaqmeysaan hawiyoow
Walaahi waa laydiinka tegaya muqdisho.
Salaan sare walaalkey.
Alshabaab qabiil gaarah maaha soomaaliweyn reeer a an Ku jirin ma laha, laakiin raxanweyn baa ugh badan waana musiibo loo soo direy dadka iyo dalka oo gacan shisheeye caawineyso.
Dhamaan xubnaha dawlada iyo baarlamaanku waa shabaab inta badan60%.
Ganacsatadu waa alshabaab iyagaa siiya dhaqaalaha ugu badan,marka iisheeg sides looks dagaalami karaa alshabaab,macnaha look cidhib tiri karaa,hadii sadexdii nin eee meel joogaba labo alshabaab tahay..
Gartu alley taqaane,soomaaliya hog bay Ku dhacdey, waxana hogga Ku riday kuwii u dhashey.
Barlamaanku 40% waa taagerayasha alshabaab.
Iyo gacanku dhiiglayaal soo xasuuqey shacabkii soomaliyed cabdi qaybdiid,muuse suudi yalaxow,faroole,ragga noocaasa baa talada wadanku gacanta ugu jirtaa,,
Ilaahayoow noo gargaar.
Farxiya Xamxamle, waan kusalaamaay walaasheey.
Abaayo waan kugu raacsanahay in dowladda Farmaajo hogaamiye wax qabatay. Su’aashase waxeey tahay waa intee waxa eey qabatay? Waase intee waxa eey haleeysay? Waxaan aaminsanahay in eey waxyar qabatay, waxaas yarna eeysan waxba aheeyn makra loo fiiriya waxa eey qaladay.
Waxa iigu darranna waxyaabaha eey ku fashilantay waa amniga. Raadi warbaxin kasta, iyo weerada argagixisa alshbaab from 2017 laga soo bilaabo ilaa maantya, argagixisda alshabaab waa soo xoogeeysatay, waana soo noqotay. Waxaana uGu wacan sababta aan kor kusoo sheegay oo ah in qabiilada madaxweeynaha iyo ra’iisalwasaaraha eey yahiin askarta argagixisda alshbaab, ragaasna eeysan rabbin in eey la dagaalamaan qabiiladooda.
Taas oo ah amniga, ayaana wax walba iiga muhiimsan.
Walaahi Xamar hadii lagu kala tago, amaba qabiil looga tago, in eey wax fiicantahay ayaanba u maleeyn. Sababtoo ah, dad yar, oo is yaqaan ayaa iskugu soo harri lahaa. Mushkiladaan dadkaan cawaanta ah ee Hawiyaha ah, oo iyaga oo tooda karri la’, oo faashiliin ah, iska dhigaya in eey Somaliya iyaga tahay in eey difaacaan, ayaana Meesha ka bixi laheeyd.
Somaliya iyo dowladnimada Somaliya waa in isku si loo contribute gareeyaaa, isku sinna looga shaqeeya. Waa daanyeer wasaq ah, qabiilka iska dhiga, isaga oo Afrikaan ilaaliyaan, in uu ku meereeysto dowladnimo Somaliya, iyo Ethopiya Ayaan nacbahay, iyo Ethopia amaba Kenya ayaa wadanka qabsaneeysa. Waa sheekada dadka doqomadda ah.
Farxiya maangaab qabiil malahan wax qabadna shaqadisa maaha xumaanta ayey ugu badisaa wa wadayaa ilaa isbaaro dub u furto
Qof aan aheyn Hawiye oo dhaliilikaro Farmaajo iyo Kheyre ma jiro,
Miishaarkooda Hawiyaa dhiibo
Goofka ay seexdaan Hawiyaa leh
Shacabka ay u qudbeeyaan Waa Hawiye
– Aniga Aqliyan – Adeer Muuse Suudi oo Hargeyso maamulo – waa igu qalad inaan Isaaq la xisaabtami Dhibsado becuase Muuse ayaa Reer Mugadisho ah.
– Milkiilaha ayaa Xusmad mudan, not Shaqeeyaha.
Allaah ha unaxariisto aabo siyaad. Muxuu doqonimo somali udiiday. 1 jubaland 3 madaxwyne. Galmudug 3 madaxwyne. Sool iyo.jegaanta shegata xoog sida ashaab uhaystaan degmooyin waayo kuwa jegaanta ushaqeeya waxay ku yiraahdaan somalinimo diida. Ashabaab dadka waxay dhahaan. Somalinimo diida qarxiya hotelada. Me laha dadka kubadabtyyihiin. Jegaanta waa la mid dhulbahante la leeyahay somalmo diid. Anaga waan diidnay lacag qaado. Puntland. Dastuurka wadanka aniga wax walba ha na la waydiiyo. Dadka kale. Mayaqanaan anaga naqaan. Federalaka shaqa kadhigteen. Yo safiir la isla sawiro jegaanta wadamada muslimka marabaan muqdsho marabno. Turkiga marabno waxaan rabnaa kuwa jigjiga gumaysta. Kinya. African. Gini. Meel bas. Aabo siyaad wuxuu yiri. Waxa jira gumaysi kalamidba. Kadaa idun qabsan doona snm ssdf joojiya dhibka way diideen wakas 80 jir muse. Somalinimo diiday wakas dani. Somalmo diiday. Safirada hadalka kamala. Gaas baa wuxuu oranjiray besha caalamka somali jegaanta tukarq soo weeraray. Saa waxa lagu yiri baga hadad wax iska celin wayday meshada joog.
Waa ILLAAHAY mahadii in Ksmaayo uusan dagaal ka dhicin sideey jeclaan lahaayeen kuwo halkan wax ku soo qora.
Seeraar iyo Axmed waa labo nin oo ilma adeera, ee shaqo kale yeesha.
Qaar kamida kuwa halkan wax ku soo qora ayaa jeclaan lahaa inuu Kismaayo dagaal ka dhaco, ILLAAHAY baan ka magan galnay xasadkooda.
Waligeed somalidu guul gaadhimayso.Xaraan ayay ka tahay.waxay ku mashuulsanyihiin muujinta qabiilka.
Waxaa ku dhacay ama haya Idendity crisis.
Intaa waxaa u dheer qabiilimadii oo laga dhigtay wax lagu hogaamiyo Reerka,qabiilnimadii oo laga dhigtay wax lagu xoog sado,qabiil nimadii oo laga dhigtay wax siyaasada lagu soo galo,qabiilnimadii oo laga dhigtay wax wax qofka kale lahu dhaliilo ama lagu eryado.Qabiilnimadii ayaa laga dhigtay wax lagu doodo.Qabiilnimadii ayaa laga dhigtay wax lagu faano oo si wax loogu helo.
Waxaad moodaa dad dib u helaya oo laga boobay asalkoodii misana nolol kaleba iska ilaaway.
Dadbaa moodaya in maamul goboleed wax ku noqnayaan kkk Kuwaasi waa Dameero oo kale.
Maamul goboleedku waa isla somaligii xanuunsanayay ee qabiilka la ordayay.Isla kii uumbaa meel uu waligii deganaa oo oo aanu ceel biyo ah ka qodin calan ka taagtay.
Waa layga boobay qoraalka
Dagaal ayay kula jira maamulka haatan jira.
Kii Dumarka somaliyeed xaraashay ayaa jooga Muqdisho.Waxaa lagu odhanayaa ka aamus oo ha sheegin kkk. Kii Badda xaraashay ayaa joooga muqdishokk
Akhasu naas oo miidhan ayaa qabiilnimo ku lacagaystay.
Ummdaasi inay dad noqdaan way ka fogyihiin.
Waxayba ku mashquulsan yhiin,ethnicity,clan,tribes iyo wax ay kusii kala fogaadaan.Kusii laga tagaan,iskusii dilaan.Maba fahansana in waxay yihiin waxa huriya colaada dhexdoooda.
Is-dila,balse waxaad iska dhaaftaan baryada Beesha caalamka.
TRUMP INTUU XERADIISII FIIRIYEY BUU KII UGU FOOSHA XUMAA NOO SOO XULEY,MALAHAYGA WUXUU IS DHAHAY SOMALIYA WAA MEEL BURBURSAN SIDAA DARTEED WAXAA U EG YAMAMOOTO.KKKKK.SIDAASUU NOOGU SOO DIREY!!!!!.KKKKK.
ALLIHII KU ABUUREY EED MALEH.
INDHIHII KU ARKAA AYAAN DARAN.
@: Sargaal . Qosol baad iga keentay .
” Qaar kamid ah kuwa halkan wax kusoo qora ayaa jeclaanlahaa inuu dagaal ka dhaca Kismaayo . Illaah baan ka magangalnay ”
” Aamiin ” lkn ma aha WARDI !
Waa runtay,ILLAAHAY baan ka magan galnay xasadkooda.
Ugus waxay xogaysata marka uu nin daarood ah
Fariisto villa somalia…. waa warbixintii ugu danbeysay
Ee caawa la shaciyey ama ugus noqda ama habar
Kuuley noqda walee Kacankii soo noqay
Muqdisho saw tii lagu Kala tegay 1991,,
Oo hawiye keligiis Ku soo hadhey oo aad laba-laba,isu qabsateen
MURURSADE VS H/GIDIR
MURURSADE VS ABGAAL.
H/GIDIR VS ABGAAL.
HGIDIR VS XAWAADLE.
Miyaad hilmaanteen ciyaarihii sad soo marteen.
War waxad heshiis Ku tihiin in leydinku
Dhex dhaqan yahay.
Car waaa beentaa I dheh.
Intaanu hawiye dhaliilo baanu muufada qalalan kugula daaraneynaa dalacbilaashka.
Maraqii idinka lee iska careynhayo ee waa diyaar
– Dee Camuuda naga daaya
Sxb walaahi Somali rag yar oo adiga ku jirto ayaa wax og meesha wax ka qaldan yihiin.
Waad ogtahay in aniga iyo adiga isku raacsanayn in dalka beelo kala ootaan iyo Federal laakiin mid baan ka simanahay oo ah waxa meesha naalo na dhigay sida federal in dan na baday… Waa Daanyeerkii Kacaanka iyo Hawiye bililiqaystay halkii Magaalo Somali lahayd, dowladnimo ka fekerin, lacag aqli ka dhigtay oo Maanta ”Farmaajo ii geeya” iyo Ugadese waso.
Somalia waxaa dumiyey askar jaahiliin ah oo 9 saac habeenimo na qabsay oo kala diray democracy bilow yar oo helnay 1969.
Maanta meeshii laga wadaa iyo dictatornimo.
Walaahi dagaalka Somalia inta federal lala dagaalin waa in ogoontii Kacaanka oo Alshabaab isla shaqeeyan marka hore lala dagaalo ka dib usoo jeesano in cadaalad wax lagu qaybsado.
Maxaa Dhuusamareeb, Cadaado, Garoowe, Kismaayo, Beledxaawo, Doolow loogu dhaaran ayadoo Xamar, Balcad, Ceelbuur, Ceeldheer, Xaradheere, Baraawe, Marka, Jilib, Jamaame meel walba Alshabaab haystaan….Maxaa Madoobe, Deni, Xaaf, Shaakir cadow ka dhigay….run
Ciidanka la haysto intee ku haboonayd in loo diro..
Ma caruur baa nahay? Who is Alshabaab?
N&N waa Alshabaab Khayre iyo Cali Dheere Xamar shaaha ku wada cabaan…..
Cadaado you know many things.
Car aniga Baraxley iisoo dhaafa, Daanyeer.
Yaa ii sheegi kara sababta ciidan loogu helay la dagaala Mareexaanka Jubbaland iyo Madoobe taageersan oo ciidan loogu waayey ciidan la dagaala Alshabaabka haysta Jilib, Jamaame iyo Buaale, sow dhulkaasba Jubbaland maaha, N&N oo weliba ciidan qaran haysto.
Farmaajo useless guy, dal iyo dad xorayn maayo..
Waa daanyeer qabiilayste ah oo Kismaayo duulaan ku ah iyo Ogadeenka iyo Hartiga jooga..Laakiin dhiig ku ceeboobo ayaa ka horeeya.
N&N daanyeer na siray…..xitaaa meel hoose jooga.
Iga rumaysta mustaqbalka Somalia ayaa miiska saaran!!!
Kuwaan way nasii kala irdhaysiin!
ninka Buugiisa ku qoray yiri: Mudulood, Majeerteen iyo Isaaq oo adoonsiga u shaqaynayey ayaa adoonsiga ku abaal mariyey in Somalia xukumaan oo ilaaway waa dadkii ku qasbay in Somalia noqoto Africa wadamadii xoriyadda u hor qaatay….Kenya 1963 hornimo heshay.
Ma Mareexaan baa wax loo dhiibi karay duurka ku jiray oo Siyaad Bare magaalo ugu horeeyey oo Majeerteen jagada siisay.
Farmaajo waa ninkaas quraafaadka aaminsan…waa naxay markaan buugiisa aqriyey….waa cawaan.
Page-hoose ayaan Ku arkey adigoo laascanood ka hadlaya,oo leh daarood ha xoreeyeen laascanood.
Hadaba aan Ku weydiiyee ,yaa laga xoreynayaa?yaase loo xoreynayaa?
Tukaraq yaa jooga?
Iidoor yuu Magan u yahay?.
Waxa fiican shaqsigu markuu wax dhaliilayo,inuu fahmo waxa ka jira meesha.
Laascanood 2007, ayay s/land Timi,waxana gadhwadeen u ahaa raggii u dhashey,
Ina caydiid dhabdhable,iyo Ina cambaashe,iyo xaabsade,raggaasa watey ciidanka,ilaa maantana waxa jooga ciidamo taabacsan s/land oo ka mushahar qaata.
Tukaraq sidoo kale waxa Kala qabsadey Dhulbahante, sababta aan loogu degdegayn dagaal ka dhaca laascanood ,waxa isku jabayaa waa Dhulbahante, waxan ka madhney qorshaha heshiis labada jabhadood island gaadheen waa ssdf iyo snm,kaasoo ah in leysku jebiyo Dhulbahante.
Halkaaa markay mareyso waxanu isla garaney inaan dagaal dhicin ee wada hadal Ku dhameysano,inshlh waanu gaadheynaa maslaxo, inshlh midnimo ayaanu rajeyneynaa.
Gobtu wey liicdaa,mase jabto”.
Aniga Dhulbahante ayaa ley yidhaahdaa,xiniinyahaa buurtaa I le’eg,daaroodna hiil ugama baahni.
Dabshidoow laascanood anigaa ka wakiil ah
Hadaad u baahato warbixinteeda.
Farxiya, walaasheey, waxa aad sheegtay ee ah in daanayeerta cawaanta ah ee Hawiya sida ad sheegtay iyo waliba ka badan isku dilleen, dadka kale iyo qabiilo kalena u dilleen, ayagana la dillay waan kugu raacsanahay.
Waxaanse kugu diidanahay fikirka eey argagixisada alshbaaab ku dhuuntaan oo eey Somali badan iskaga hadlaan oo ah in cid kasta iyo qabiil kasta argagixiada ku jirto. Taasi waa been. Marka loo eego, qabiilada askarta u ah, qabiilada eey beecada iyo heshiiska la galleen, qabiilada eey bartilmaansadaan, iyo qabiilada eey ka leexdaan. Hal qof, iyo 10 qof oo qabiil kaga jirra lagama hadlaya. Waxaa laga hadlayaa “engine” matoorka argagixisada alshabaab kusocota yaa waaye?
Land of punt, waad mahadsantahay, arrinka daanyeer Farmaajo ee isaga oo Xamar tabar u waayay, oo eey Afrikaan ilaaliyaan, iyada oo Afgooya iyo Balcad diayarad loo raaca iska dhaaf meel kale’e, iyada oo Shabeelooyinka, Galgaduud, iyo kalabar Mudug, iyo Hiiraan, iyo Jubadda Dhexe, iyo inta badan Jubadda Hoose eey heestaan argagixida alshabaab, in uu dhaho askar Ayaan Geddo diayarad ku geeyn, amaba askar Ayaan Dhuusamareen diayarad ku geeyn, waa calaamad iska cad, in daanyeerkaan Farmaajo eeysan muhiim u aheeyn dagaalka argagixisada alshabaab iyo amniga dalke, ee uu daanyeer stupd ah yahay, oo ku fikiraya sidii adeerkiis Afweeyne, oo ah aabaha iyo hooyada wax walba oo Somaliya ka qaldamay camal in uu u dhaqmo, amaba uu noqdo.
Now, hal arrin ayaan rabbaa in aan dul istaago, oo ah in daanyeerkaas aan sheegay ee Farmaajo uu run ka sheegay arrinka uu buugiisa ku qorray ee ah in Isaaq, Majeerteen iyo Abgaal uu gumeeystahii dalka heeystay ku abaalmarriyay in uu u dhiibo xukunka markii xorriyada la qaatay, taasoo eey sabab u tahay maxaa yeelay Sadexdaan qabiil waxeey aad ula shaqeeyn jirreen gumeeystaha.
Marka saaxiib, land of punt, yeeysan qabyaalad ku qaadin iyo qabiil difaac marka runta laga hadlayo. Arrinkaas waa xaqiiq, qofkii caqli leh fami karro. Waana sababta ka dhigtay in Sadexdaan reer eey ka saameeyn baddan yahiin qabiilada kale ee agoonta kacaanka marka eey timaado siyaasada Somaliya. Run.
Axmed madoobe 6 bilood ayuu xeerinayey labada nijaas ee kala ah Xiddig & Seeraar.
Kol haddayba ku dhiiradeen inay magaalada Kismaanyo nabadgalyadeeda cadow ku yihiin. Waa inaanu mar dambe xeerin ee uu soo qabtaa xabsiga dhigaa ama uu aakhiro u diraa.
Isku daygii maanta ay sameeyeen kuna soo beegeen xilli shir mihiim ah magaalada ka socdo wuxuu muujinayaa inay yihiin shakhsiyaad aad u liita oo diciif ah. Oo aan astaahilin inay magaaladaas sii joogaan
Sifiican ayaan kuula socdaa
– Horta Hadalku wuxuu ku socdey
Raga u kala hiilin Ogaaden iyo Mariixan
Wuxuu kaloo ku saabsanaa Maxaa ku Tusiwaayey RAGA ISKU HEYSTO LAASCAANOOD oo dhiig iyo darisba kaaga dhow
rag isku heysto 1000 miles korkeed
Waxa ka jiro/socdo
CEELBIYOODKII SIYAAD idinkaga dhigey GOBOLKA – kkkkk
si fiican ayaan uga warhayaa.
Dadku waa xidid iyo Saaxiib iska warhayo
* LAAS-CUSBEEYE iga dheh
Laascanood ilaa ingiriiskii bay gobolka soil aheyd,wax hubso..
Ragga aad sheegayso iyo Dhulbahante waxba Kama dhexeeyaan.
Tusaale waxa kuugu filan weerarkii barxadan kalshaale leygu soo qaadey.
Ilaaa iminkana dhufeys baanu isugu jiraa
Xabadu dhuuntey taagan yahay,deee tolnimo ma jirtee boowe aashaaa.
Waqtigii gumeystuhu haystay dhulka somaliyeed waqooyi waxa xukumayey ingiriis
Koonfur,mudug ilaa Bari,oo ay ka talineysay boqortoyadii bahdir,oo taabacsaneyd gumeystaha talyaniga,hawiye oo koonfurta dega,talyaanigu qabiilooyinkuu gumeysanayey si xun buy ula
Dhaqmi jirey marka roobku da’o,dhulka dhiiqada ah intuu jiifiyo dadka ayuu Ku dulsocon jirey,awoodna umay laheyn iney hadlaan,markii danbe waxa ka gilgishay dulmigaa beesha biyamaal ,ilaa ayka xoroobeen,waa su’aale,hiraabkan iminka fagfagtiisa laga joogi waayey ,waagaas xagey jireen, dabshid,cadaado garqaad.
Ma waxad ka mid ahaydeen raggii market maqlaan xabad odhan jirey *dhuuso-daarood*.
Waqooyiga waxa haystay ingiriis dadkuna waxay u qaybsanyeen in LA jihaadeysay,in in dabadhilif u ah iyo in aan dhinacba raacsaneyn,laakiin ingiriisku wuu ka dhaqan wanagsanaa talyaaniga.
Waryaadhaheen lama Kala xanaaqaan
Caawa dhuunta shilkaha ayaan tijaabinayaa,
Oo dhinac walba hal saalbo ayaan u tuurey.
Ujeedkeygu waxa weeye farmaajo buuga uu qorey runtuu ka sheegay.
Wlh meelkasto ayaan ka sheega
Inaan Dumarka Harti lagu tirinkarin Xaawaley
* Ragaan adaa hogaamiye, halkii kucaayo hilmaan
Anagu maqarino ninkii reer Qurac ah oo halmamaa ahaa, lkn idinka wali waxaad moodin in Arigii la idin raacin. Kkk
Bal adi noo sheeg nin jihaadka ku horeeyey Sayidkii Geel qaadka ahaa iyo Shiikh Gaal diidka ahaa
( Qorshaha kudarso BARSANE WAA JOWHAR)
Aqriso hadey kaa qariyeen
Leygama qarin laakiin barsame/iyo biimaal yaa Ku horeeyay jihaadka.
Sayidka habayartiisaan ahay eee ka qalee.
Dabshid hadalkeyga inta badani waa kilkileys ,dad baan rabaa inaan dhiiga Ku kariyo.
Laakiin labadeenu weynu isla fahanaa bootada.
sxb Haddii Isaaq, Abgaal iyo Majeerteen gumaysta u shaqanayeen dee cidkale ma jirin oo og waxa la isku haysto.
Isaaq waa kuwii calanka qaatay 1960 oo keenay, Majeerteen markii hobyo lagu jabiyey waa raggii SYL aasaasay…
Abgaal raggii ciidan u ahaa SYL oo Somalimada ka shaqeeyey qayb caadi ahayn qaateen..
Dadkale xagee jireen?
Ha isku qaldin in gaalada la macaabilayeen iyo in cidkale Somali matasha oo kale jirin waqtigii xoriyadda.
Marka runta tagtayna gaaladii madaxa ka tumeen.
Xoriyad keeneen intaan Afrikada madow qaadan.
Somali Isaaq, Mudulood iyo Majeerteen laga saaray intee joogtaa ilaa maanta la joogo..kkkkkk
Yaan la ilaawin haddii beelaha aad sheegtay u shaqaynayeen gumaystaha.. Aden Cabdille Cisman, Cabdulahi Ciise oo ahayn beelahaas ayagana ku dar dabadhilifka. kkkkkkk😁
Dacaayad intee lagu gaarin…runta iskuma sheegto Somali.
Xagee ka dagaaleen beelaha kale..
Quule iyo gocoso la dagaalayeen…kkkkkkkk
Macal Darawiish Sayid Maxamed iyo Abshir Dhoore hogaaminayey taasna yaan la ilaawin.
Gabar reer Qurac anigaba waa ka baqaa..kkkkkk
Sida ragga isaga celinaa..run
Waa cid gabadha iyo wiilka lagdansiiya hadduu wiilku gabadha lagdo..u roga… wiilka mooda in ka adagtahay..
Weliba Harti ragooda nagaaha ka ragsan, kkkkkkk
Taas cid iga dambaysa ha weydiin!!!!
Nin guri gabar reer Qurac kasoo toosay waxaad arkin asaga oo kabaha gacanta ku sita oo baxsad ah ama waxaad arkin asaga oo ragga kale dhan ka horeeya….!!!!!
Warkaas waa war cad, inkasta oo hadda aduun isbedelay..🤣
Weligaa ma maqashay Majeerteen rag ma leh, dumar bay leeyihiin…? keligood maaha.
Shalay hal gabar ayey saddex wiil u dileen…inkasta oo arin cusub ahayd…oo Somali dhan la yaabtay.
Waxay dhaqan u lahaayeen in beelo dhan isku dhamaadeen gabar la xumeeyey.
Weligaa ma maqashay sheekadii Afxakame iyo dagaaladii Casar-Belo, Car-tuko..waxa ku bilaabmeen? Mudug iyo Ciid sheeko ka dhacay.
Shaagle laga baqay…kkkkkkkk